Momba anay - Qingdao Qiangli Steel Structure Co., Ltd.
Qingdao Qiangli Steel Structure Co. Ltd, hita tamin'ny taona 1998, dia mirotsaka amina karazana firafitry ny firafitra vy, ny fanamboarana ary ny fametrahana azy, izay manome serivisy fijanonana tokana ho an'ny mpanjifa ho toy ny orinasa manokana lehibe. Izahay dia mahafeno fepetra ho Qingdao High Technology Enterprise ary filoha lefitra Enterprise ao amin'ny Jiaozhou Steel Structure Association. Manana GB / T 19001-2008 / ISO 9001: 2008 Certification System Management Quality, GB / T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 Certification System momba ny fitantanana tontolo iainana, GB / T 28001-2011 / OHSAS 18001: 2007 fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa. Fanamarinana ny rafitra; manana ny mari-pamokarana famokarana indostrialy nasionaly ny tilikambo fampitana 750kV, ny mari-pamokarana famokarana indostrialy ho an'ny fahitalavitra sy ny Telecom Tower (andiany rehetra), ny mari-pahaizana momba ny fametrahana ny firafitry ny vy LEVEL II, ny mari-pahaizana Galvanizing mafana, ny mari-pahaizana 100kV avo lenta , 500kV Substation Steel Structure Qualification, 220kV Tubular / Pipe Pole Qualification; Izahay dia mpamatsy State Grid mahay ho an'ny AC1000kV Uhv tsipika fandefasana tsipika, tilikambo vy DC800kV Uhv, tilikambo vy 10 ~ 750kV, 10 ~ 1000kV tilikambo fantsom-by, 10 ~ 220kV vy, 10 ~ 500kV firafitra vy; Mpamatsy ny China Tower Company amin'ny faritany maro izahay, manan-jo hanondrana izahay. Nandritra ny taona maro, Qiangli Co. mifikitra amin'ny politikam-kalitao “mamokatra vokatra avo lenta, miantoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ', Izay manantitrantitra ny kalitao sy ny serivisy. Miaraka amin'ny fanampian'ny traikefa midadasika, Qiangli Co. Nahazo teknolojia mahafinaritra, nanangona traikefa ary namolavola ekipa matanjaka. Qiangli Co. dia nahazo ny fitokisana avy amin'ny mpanjifa miaraka amina vokatra avo lenta, serivisy tonga lafatra ary fanahy vaovao.
Ny famokarana lehibe ataon'ny orinasanay dia misy: tilikambo fampitana herinaratra, tilikambon'ny serasera mikraoba, tilikambo radio & fahitalavitra, tilikambo fanilo sy fanilo, tilikambo rivotra, tilikambo haingon-trano, famokarana herinaratra, firafitra vy, rafitra firafitry ny vy sivily, rafitra vy misy ny lalamby, sns. ny tilikambo sy ny firafitry ny vy. Ny vokarinay dia amidy amin'ny tsena anatiny amin'ny faritra Sina manontolo ary manondrana any Azia, Afrika, Amerika, Moyen Orient sns, izay firenena 20 mahery.
Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny faritanin'i Jiao Zhou City Shandong, akaikin'ny ranomasina mavo sy ny helodrano Jiao Zhou. Misy làlambe roa mifanila aminy (làlambe Jiqing sy làlambe Shenhai) ary ny seranan'i Qingdao akaiky eto izay manome fampialana voly amin'ny fitaterana entana. Ny velarantanin'ny orinasa dia 173.000 metatra toradroa, ny velarantany fanamboarana dia 73.000 metatra toradroa. Miisa 597 ny mpiasa amin'ny faritra manontolo, ao anatin'izany ny teknisiana 120. 100.000 taonina ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra isan-taona. Manana fitaovana mandroso sy mandeha ho azy marobe isika ao anatin'izany: ny angovo famokarana vy amin'ny angle CNC ary ny tsipika famokarana taratasy CNC, ny vy vy flange ary ny fantsom-pifandraisana mampifandray ireo tsipika famokarana fantsom-pamokarana, milina fanapahana lelafo CNC, milina fanapahana plastika CNC, milina fandavahana fiaramanidina CNC, CNC milina miondrika hydraulic, ny fiolahana masinina fanapahana CNC, baomba lehibe, milina fantsom-bokatra, milina fanoratana, milina fantsom-boaloboka mandeha ho azy 14.5m * 2.2m * 3m fotodrafitrasa ho an'ny famokarana galvanizing mafana, rafitra fanaraha-maso mari-pana tsy miova amin'ny entona, miantoka ny kalitaon'ny vokatra vita amin'ny galvanized; Sehatra fivorian'ny ankapobeny mitsangana lehibe sy vano mitafo 6 taonina, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fametrahana andrana amin'ny karazana tilikambo rehetra; Fitaovana sy fotodrafitrasa fanandramana ara-batana sy simika tonga lafatra, fanandramana ultrasonika, fitaovana fitiliana lesoka amin'ny taratra X, mahatonga ny kalitaon'ny famokarana ho mora sy mahomby hifehezana.
Izahay dia hihevitra ny mpanjifa ho ivon-toerana, fiaraha-miasa amin'ny firaisan-kina, marina sy mendri-pitokisana, fanavaozana ny mpisava lalana ary fikirizana ho soatoavin'ny votoatin'ny orinasa; fanatrarana soatoavina ho an'ny mpanjifa, famoronana fotoana mety ho an'ny mpiasa, fanatanterahana am-pahamalinana ny tetik'asa tsirairay, fanomezana anjara biriky ho an'ny fanambinana ny tanànantsika sy ny firenentsika dia iraky ny orinasa Qiangli Co; mivoatra maharitra ho lasa fahatokisan'ny mpanjifa indrindra, fanajana ara-tsosialy ary orinasa iaraha-miasa ny mpiasa, dia ny fahitana ny orinasa Qiangli Co.
Tilikambon'ny Serasera Kaonty, Firafitra Steel Prefab, Rafitra vy amin'ny Tube, Tilikambo vy anggoro elektrika, Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika, Tilikambo famindrana angovo vy,